Akụkọ - atwa Diatomaceous Maka Inmụ Ahụhụ
Have nụtụla banyere ụwa diatomaceous, nke a makwaara dị ka DE? Ọfọn ma ọ bụrụ na ọ bụghị, kwadebe ka iju gị anya! Ojiji nke uwa diatomaceous n'ime ugbo di nma. Diatomaceous ụwa bụ ngwaahịa dị ịtụnanya nke ụwa niile nwere ike inyere gị aka toro ogige mara mma ma dị mma.
Gịnị bụ Diatomaceous Earth?
Diatomaceous sitere na osisi mmiri fosilized ma bụrụ ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-edozi ahụ na-esi na algae-dị ka osisi diatoms. Osisi abụwo akụkụ nke usoro ihe ọmụmụ ụwa nke ụwa nke malitere n'oge ochie. A na-akpọ chalky ego diatoms fọdụrụnụ diatomite. A na-egwupụta ihe ndị ahụ ma mee ka ha nwee ntụ ntụ nke nwere ọdịdị ma nwee mmetụta dịka ntụ ntụ.
Diatomaceous ụwa bụ ọgwụ na-egbu ihe na-egbu ihe na ihe mejupụtara ya bụ ihe dịka 3 pasent magnesium, 5 pasent sodium, 2 pasent iron, 19 pasent calcium na 33 pasent silicon, yana ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-achọpụta.
Mgbe ị na-eji ụwa diatomaceous maka ogige ahụ, ọ dị ezigbo mkpa ịzụta naanị "Nri nri" ụwa diatomaceous na B NOTGH the ụwa diatomaceous nke dị ma jiri ya maka ebe a na-ete mmiri ọdọ mmiri ruo ọtụtụ afọ. Diwa diatomaceous eji mee ihe na mmiri mmiri mmiri na-agabiga usoro dị iche nke na-agbanwe ihe etemeete ya iji tinye ọdịnaya dị elu nke silica n'efu. Ọbụna mgbe ị na-etinye nri nri diatomaceous ụwa, ọ bụ ihe kachasị mkpa iji eyi mkpuchi uzuzu ka ị ghara ịmịkọrọ ọtụtụ uzuzu diatomaceous, dịka uzuzu nwere ike ime ka akpụkpọ anụ mucous dị na imi na ọnụ gị iwe. Otú ọ dị, ozugbo uzuzu ruru, ọ gaghị enye gị na anụ ụlọ gị nsogbu.
Gini bu ihe eji eme Diatomaceous na Ogige?
Ojiji nke ụwa diatomaceous dị ọtụtụ mana na ubi a pụrụ iji ụmụ ahụhụ mee ihe na-egbu egbu. Diatomaceous ụwa na-arụ ọrụ iji kpochapụ ụmụ ahụhụ dịka:
Okenye Ugha okenye
Ọchịcha Snails Slugs
Nye ụmụ ahụhụ ndị a, ụwa nke na-egbu egbu bụ ájá na-egbu egbu nke nwere microscopic dị nkọ nke na-egbutu mkpuchi ha ma kpoo ha.
Otu uru nke ụwa diatomaceous maka nchịkwa ụmụ ahụhụ bụ na ụmụ ahụhụ enweghị ụzọ ha ga-esi wulite iguzogide ya, nke a na-enweghị ike ikwu maka ọtụtụ ọgwụ na-achịkwa ọgwụ ahụhụ.
Diatomaceous ụwa agaghị emerụ ikpuru ma ọ bụ microorganisms bara uru dị na ala.
Etu esi etinye Earth diatomaceous
Imirikiti ebe ị nwere ike ịzụta ụwa diatomaceous ga-enwe ntuziaka zuru oke na ngwa kwesịrị ekwesị nke ngwaahịa a. Dị ka ọgwụ na-egbu ihe ọ bụla, hụ na ị gụrụ akara ahụ nke ọma ma soro ntuziaka ndị dị na ya! Ntụziaka ndị a ga-agụnye otu esi etinye ụwa diatomaceous (DE) n'ọrụ n'ime ogige na n'ime ụlọ maka ịchịkwa ọtụtụ ụmụ ahụhụ yana ịme ihe mgbochi nke ụdị megide ha.
N'ogige diatomaceous ụwa nwere ike tinye n'ọrụ dị ka uzuzu ya na a ájá applicator mma maka ndị dị otú ahụ; ọzọ, ọ bụ ihe dị oke mkpa iyi mkpuchi uzuzu n'oge itinye nke ụwa diatomaceous n'ụzọ a wee hapụ mkpuchi ahụ ruo mgbe ị hapụrụ mpaghara ntụ. Zere anụ ụlọ na ụmụaka ka ha kpochapụ ebe ndị ahụ na-ekpo ọkụ ruo mgbe ájá kwụsịrị. Mgbe ị na-eji dị ka ngwa uzuzu, ị ga-achọ iji uzuzu kpuchie elu na ala nke ahịhịa niile. Ọ bụrụ na mmiri zoo ozugbo ngwa ruru ájá, ọ ga-adị mkpa itinye ya ọzọ. Oge buru ibu iji mee uzuzu uzuzu bu ihe adighi nma mgbe mmiri ozuzo di nfe ma obu n'isi ututu mgbe igirigi di n'elu akwukwo ka o na enyere aka ka uzuzu rapara nke oma.
Nke a bụ ngwaahịa dị ịtụnanya sitere n'okike maka iji ya mee ihe na ubi anyị na gburugburu ụlọ anyị. Echefula na ọ bụ “Nri Nri” nke ụwa diatomace ka anyị chọrọ maka ubi na ebe obibi anyị.
Post oge: Jan-02-2021